Shina: Manara-maso Ny Fifidianana Ho Filoha Hatao Amin’ny 2012 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Desambra 2011 13:04 GMT
Ny voalohany tamin'ireo adihevitra telo natao tamin'ny fahitalavitra momba ny fifidianana ho filoham-pirenena hatao ao Taiwan no natao tamin'ny faran'ny herinandro, ary nanara-maso akaiky an'izany ireo mpitoraka bilaogy kiritika avy ao Shina.
Ma Ying-jeou dia mbola mitarika foana ny Kuomintang (KMT), saingy efa leo an'i Chen Shui-bian ny Democratic Progressive Party (DPP), ary toa vonona indray hiverina an-tsehatra , tarihan'ilay vehivavy voalohany ao Taiwan milatsaka hofidiana ho filoha, Tsai Ing-wen.
Mpirotsaka iray fahatelo i James Soong, no nisoratra anarana ho kandidà saingy milaza fa izy dia hanohy izy raha toa fotsiny ihany ka mahaangona sonia iray tapitrisa.
Sarin'i Ma Ying-jeou (L) sy Tsai Ing-wen niteny nandritra ilay adihevitra tao amin'ny fahitalavitra.
Azon'ny olona natao ny nanaraka nivantana ilay adihevitra tamin'ny alàlan'ny rohy samihafa mandefa ‘streaming’ tany anaty aterineto, ary ny lahatsary momba azy io ia efa nakarina any amin'ny ankamaroan'ireo tranonkala lehibe fametrahana lahatsary, saingy ny fifanakalozan-dresaka dia nifantoka nanodidina ny Sina Weibo. Maro ireo mpijery no diso fanantenana raha niandrandra zavatra toy ireny adihevitra momba ny fihodinana sava ranonando amin'ny fifidianan'antoko any Etazonia ireny, ary maro tamin'ireo ‘bitsika mivantana’ nifanakalozan-dresaka tao amin'ny aterineto no nitady izay hanasongadinana ireo zavatra izay eken'ny rehetra ho toy ny porofo mivaingana :
Raha toa tafita mankany amin'ny tena demaokrasia i Taiwan, dia ho afaka koa i Shina avy eo.
Ny politika demaokratika eken'ny rehetra ao Taiwan dia raisin'ny shitizens ao amin'ilay fanjakana masina amin'ny fomba fandraisantsika ny famaranana ilay fifanarahana Super Girls izay hofoanana atsy ho ela : fialamboly midonanam-poana rehefa tsy manan-katao.
Ry manam-pahaizana manokana, mba lazao ahy azafady: ankoatra an'i Korea Avaratra st Kioba, misy ve firenena hafa eto an-tany mbola manana filoha mpitarika tsy voafidy tamin'ny fomba demaokratika? Marina mafy? Tsy misy na izay aza?
Momba ny fahefan'i Sina Weibo ho afa-mamadika ny ‘lainga’ ho lasa ‘zava-misy’, ny adihevitra tao dia nitondra ny Weibo Piyao, ilay sehatra fitorahana bilaogy kiritika misy ilay kaonty ofisialy miampanga ireo tsahotsaho, hanoratra hoe:
Tsy ela akory izay, mpampiasa iray tao amin'ny Weibo no nanoratra fa i Ma Ying-jeou dia niteny fa ireo fifanakalozan-dresaka momba ny fanambàrana indray dia ho afaka hanana ny toerany raha toa, ary amin'izay ihany, ka tonga eo ambony latabatra ny olan'ny “fahalalahana, demaokrasia ary ny fitoviana”. i @WeiboPiyao dia nifandray tamin'ny mpitondra tenin'ny biraom-pampielezan-kevitr'i Ma, Lee Chia-fei, izay nandà fa tsy nanao izany fanambaràna izany velively i Ma. Araka izany, nofafàna ny kaontin'io mpampiasa io.
Avy ao amin'ny Wikipedia, ‘Republic of China presidential election, 2012′ (12/04/2011), na ny Fifidianana izay ho filoham-pirenena ao Shina, 2012:
Ny marimaritra tamin'ny 1992 no toa lohahevitra goavana iray momba ny fifidianana, filaza iray manoritsoritra ny vokatra nentin'ilay fihaonana tamin'ny 1992 teo amin'ireo solontena ofisialin'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Shina sy ny Repoblikan'i Shina. Ny KMT dia manosika indray io fifanarahana io ho eny anoloana, izay mikendry ny mba ho demaokratika kokoa ary holanian'ny rafitra mpanao lalàna sy fitsapan-kevi-bahoaka iray atao amin'ireo vahoaka any ROC. Eo ambanin'ny fifanarahana vaovao an'ny DPP, io no tokony ho fototry ny fifampiraharahana rehetra iarahana amin'ny PRC (Repoblika Entim-bahoakan'i Shina).
Araka ny filazan'ireo mpanara-baovao, na izany aza, raha ampitahaina amin'ny fifidianana izay ho filoha tao Taiwan tamin'ny 2008, betsaka ireo Shinoa mpiondana aterineto, nandritra ilay adihevitra, no nifantoka tamin'ireo olana fa tsy zavatra hafa toy ny momba ny hoavin'ny fifandraisana ao amin'ny Vavarano. Ilay bilaogera be mpanaraka, Zheng Dongyang, dia nanao fandrakofana manontolo an'ilay andian-dresaka, tafiditra amin'izany ireo politika anatiny, tao anatinà lahatsoratra lavabe nosoratany mikasika ireo zavatra mifandraika amin'ny resaka fanambàrana indray sy mikasika ireo zavatra nahaliana azy tamin'io adihevitra io. Manoloana ny resaka fanambàrana indray , mitaha amin'ny fahaleovantena, na izany aza, dia manoratra i Zheng writes:
Amiko manokana, tsapako fa aloha loatra izao hilazàna hoe iza no handresy, ny zavatra azo vinaniana amin'izao dia hoe ity fifidianana ity no ho ny fifidianana azo antoka indrindra sy azo leferina hatramin'ny naha-demaokratika an'i Taiwan. Tsy dia miankina loatra amin'izay famoriam-bahoaka any ny DPP mba hanosika azy ho ny amin'ny fara-tampony, tsy dia ilainy akory ny miandry ny fitseran'ny vahoaka, ny vondrona ara-poko, ny maha-Taiwanais, na ny hilalao ny karatry ny fahaleovantena. Na dia voatery handao ny politikany mitky ny fahaleovantenan'i Taiwana aza ny DPP, tsy ho toy ny fony faha-Chen Shui-bian akory izany, izay manosika an'i Shina hanandrana matetika ny bokotra sisintaniny. Ny KMT, mandritra izany, dia mifantoka amin'ny fanohizana ny polikany ; tahaka ny Min Nan an'i Ma Ying-jeou mitohy mahazo aina isan'andro, dia toy izany koa fitombon'ny isan'ireo fitsidihany ny any atsimo.
Ny tsapako tamin'ity adihevitra natao tamin'ny fahitalavitra ity, tena marina, dia raha toa ka fisamantsamahana no fahatsapana farany nentin'ny ankolafy manga sy maitso ho an'ireo vahoaka Taiwanais momba ilay resaka fanambàrana indray amin'i Shina, na hijanona ihany ho mahaleotena, ireo politikam-pitantanana avy amin'ny lafiny roa dia samy nahazo isa teo imason'ny olona. Ny ‘tsipiky’ ny renirano Choshui [izay mampisaraka hatry ny fahagolan-tany ny mpomba ny fahaleovantena any atsimo sy ireo mpandàla ny fampitambàrana avy any avaratra] dia efa mihalefy miandalana, ary na andaniny sy ny nakilany dia samy nanomboka nahita ny mpifidy eo afovoany eo, izay ny betsaka indrindra misafidy ny tsy hihetsika amin'izay efa hitany ankehitrio momba ny fifandraisana ao amin'ny Vavarano, toy ny olona azo ampiraisina. Raha tsy eo ity olana ara-tantara mitambesatra ity, ny vahoaka dia mifantoka bebe kokoa amin'ny hoe ny an'iza amin'ny politikan'ireo antoko politika roa no mendrika ho an'ny fampivoarana ny asa fiveloman-dry zareo na ny fnatsaràna ny fari-piainany. Io fiovàna io no traikefa azon'ireo mpifidy ao Taiwan avy amin'ireo fifidianana tany aloha.